गणतन्त्र हामी ल्याउने, मोज तपाई गर्ने ? भन्दै घाइते लडाकुले मन्त्री बस्नेतलाई हातपात गरेपछि..
पुष २३, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ । बनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जनयुद्धकालीन उनका सहयोद्धा अमृत नामका पूर्व घाइते लडाकुले हातपातको प्रयास गरेको समाचार छ । ,साँघु साप्ताहिकमा यो समाचार छ ।
जनयुद्धको घाइते अमृत बनमन्त्रीको गृहजिल्ला जाजरकोटका हुन् । जवानी जनयुद्धमा सकेका अमृत रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं आएका थिए । जिल्ला निवासी तथा चीरपरिचित नेता शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न मन्त्री क्वार्टर हरिहर भवन पुगेका उनलाई मन्त्री बस्नेतले रेस्पोन्स नगरेपछि विवाद भएको मन्त्री क्वार्टर स्रोतले बताएको छ ।
‘हामीले जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र ल्याउने तपाई मोज गर्ने ? जनयुद्धका अपाङ्ग घाइतेहरुको व्यवस्थापन नगर्ने भन्दै अमृतले मन्त्रीलाई थर्काएपछि भएको भनाभन अमृतले मन्त्री बस्नेतलाई आक्रमण गर्न खोज्दा मन्त्रीका भतिजा अरुण र मुक्ति बस्नेतले बचाव गरेको बताइएको छ ।
अरुण मुक्तिले अमृतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बनमन्त्री शक्ति बस्नेत कुटाइ खानबाट जोगिएको मन्त्री क्वार्टर स्रोतले बतायो । सिंहदरबारमा तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुमा जनयुद्धका पूर्व लडाकुहरुको त्रास बढेको छ ।
दुई तिहाईको सरकारले पनि जनयुद्धका घाइते,अपाङ्ग र घारबारविहीनहरुको व्यवस्थापन नगरेकोले पूर्व लडाकुहरु मन्त्रीहरुमाथि रिस पोख्ने भन्ने दाउमा रहेको पाइन्छ । स्रोतले भन्यो– ‘आर्थिक सहायताको अपेक्षा राख्दै दैनिक दर्जन बढी पूर्व माओवादी लडाकुहरु सिंहदरबार पुग्ने गर्छन् ।’
प्रकाशित : सोमबार, पुष २३, २०७५१०:३२
गृहमन्त्री माथि जुनैपनि समयमा आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा !
उपत्यकामा जताततै ज्यानमारा खाल्डा : जनता मार्ने सरकारको पासो !
किन हुन्छ बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनामा बम विस्फोट ? ५ आक्रमणका घटना रहस्यमै
‘डिभोर्स कान्छीसँग हो, जेठी मसँगै छ’
गुप्तचर अधिकृतबीच दरबारमार्गमा ‘ग्याङ फाइट’ भएपछि…
जान्नुहोस् रत्न लगाउनुका महत्व र सही तरिका